IBhayibhile ithi kufuneka ukumamkela uYesu | Apg29
Zonke ezi vesi zibonisa ukuba kufuneka ukwamkela uYesu basindiswe!
Sibona iBhayibhile ifundisa ngokucacileyo ukuba kufuneka ukwamkela uYesu Kristu ukuba basindiswe. Ukuba nabani na uthi ngenye indlela, yena uhamba nxamnye imfundiso yeBhayibhile ngalo mbandela ubaluleke kakhulu.
Apha Mandidwelise iindinyana eziliqela zeBhayibhile njengoko wonke umntu uza kufumana uYesu. Kukho izibhalo ngakumbi ngale, endingamwiselanga zibandakanyiwe apha. Kwaye zonke ezi ndinyana ibonisa ukuba kufuneka amamkele uYesu!
ISibhalo ngokucacileyo ukuba umntu kufuneka amkele uYesu
Luke 9:48 Wathi kubo, Othe wamamkela lo mntwanana egameni lam, wamkela mna. Nothe wamkela mna , wamkela lowo wandithumayo. Kuba lowo umncinane phakathi kwenu nonke, yena uza kuba mkhulu. (Bona Marko 9:37, uMateyu 18:. 5 Luka 18:17)
Luke 10:38 Kwathi ke ngomhla, waya kungena kwidolophana, nomfazi ogama linguMarta wamamkela ekhayeni lakhe.
Luk 19:6 Och han skyndade sig och kom ner och tog emot honom med glädje. (Läs också Apg 2:41 och Rom 5:11.)
Joh 1:12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. (Läs också vers 13.)
Gal 4:14 Kwaye ke intlungu I wabandezeleka enyameni yam, lo edelekileyo, ukucekisile na nawe, kodwa wafumana kum njengoko sinjalo isithunywa sikaThixo, ewe, ukuba uKristu Yesu .
Kolose 2: 6 Njengokuba sele ngoku namamkelayo uKristu Yesu iNkosi , ngoko ubomi kuye,
ISityhilelo 3:20 Yabona, ndimi emnyango ndinkqonkqoza. Ukuba uthe umntu waliva izwi lam, waluvula ucango, ndiya kungena ndihlale naye aze aye komulela kuye, naye adle nam. (Uya kufumana uYesu ngokuvula entliziyweni.)
Ekubeni kukho iingxelo ezininzi zeBhayibhile zihambisana ukwamkela uYesu, leyo, umzekelo, uthi ukuba "babelamkele ilizwi", "balamkela yokucamagusha," njalo njalo.
Luke 18:17 Inene ndithi kuni, Othe akabamkela ubukumkani bukaThixo njengomntwana uya kuze aye apho.
John 3:33 Lowo ubamkelayo ubungqina bakhe uqinisekisa okokuba uThixo uyinyaniso.
IZenzo 2:41 Bathe ke ngoko , abalamkele ilizwi lakhe , babhaptizwa, ukuze nongeze ibandla ngaloo mini imiphefumlo engathi imawaka mathathu.
IZenzo 11: Wenza njani abapostile nabazalwana ababekwelakwaYuda beva ukuba nazo iintlanga zilamkele ilizwi likaThixo .
Rom 5:11 Asikukuphela ke oko; singabazingca nokuzingca nangaye uThixo, ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu, esamkele ngayo kalokunje safumana uxolelaniso olo .
Rom 5:17 Kuba xa ukufa weza ngukumkani emveni kokuba ityala ngalowo mnye, ngoko, kokukhona baya kuthi aba bakwamkelayo ukuphuphuma kobabalo, noko kuphiwa ubulungisa , nokulawula ebomini ngaye lo umnye, uYesu Kristu ebomini.
1 Korinte 15: 1-2 Kodwa ke ndinganikhumbuza, bazalwana, malunga iindaba ezilungileyo , ezo ndazishumayela kuni, apho wafumana ngawo nani nokusindiswa ngazo, ukuba nizibambile ukuya amazwi, nimiyo nokuma niqinile, I ndazishumayela kuni, kungenjalo wena ukuba ukholelwe lilize.
Kukho izibhalo ezininzi ngakumbi ngalo mbandela. Ngokomzekelo, mna nkqu quote bible ukuba uthi zange ukwamkela uYesu, yaye xa siqonda ukuba kufuneka umamkele.
Njalo siyabona ukuba iBhayibhile ifundisa ngokucacileyo ukuba kufuneka ukwamkela uYesu Kristu. Ukuze basindiswe nomntwana kaThixo, kufuneka amkele uYesu!
Yamkela uYesu ngoku
Ukuba ufuna ukuba zisindiswe, ufumana uYesu ngoku kule mthandazo, uthandaza ngokuvakalayo ngomlomo wakho uYesu:
Nceda undixelele ukuba ngoku ke nenzelwe uYesu usindiswa!